စနေလင်း| November 28, 2012 | Hits:90
6 | | ရမည်းသင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက်
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website AKN November 28, 2012 - 12:27 pm	There is always amicable solution. If the stakeholders and the authorities do not want to solve that way, it will becomeahistory.
Reply	ရွှေဘ November 28, 2012 - 12:29 pm	“သူတို့အင်အားက ၅၀၀ ကျော်လောက်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး ကျနော်တို့ကို ရိုက်နှက်၊ လက်ထိပ်ခတ်၊ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲပြီး ကားပေါ်ကို ဆွဲတင်တယ်။ ကားပေါ်ရောက်မှ နာမည် မေးတယ်။ နောက်မှ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ၂ ဦး ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ ၄ ဦးကိုတော့ မြို့လှမြို့ထဲခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ ဘယ်သူ့ကို ဖမ်းရမယ်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ပါတယ်”ဟု ကိုရဲဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
Reply	ဗမာပြည်သား November 28, 2012 - 2:43 pm	ဗမာပြည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှမှာ အစိုးရလူထည့်ထားပြီးသား။ သူကတဆင့် ဓါတ်ပုံ၊ အမည်စာရင်းရပြီး ဖမ်းတာချည်းပဲ။ သတိထားကြပါ။ ဖမ်းမှာမကြောက်တဲ့သူ၊ သေမှာမကြောက်တဲ့သူဆိုတာ (၂)မျိုးပဲရှိတယ်။ (၁) တကယ့် သူရဲကောင်း (၂) သူလျှို ။
Reply	pnwara November 28, 2012 - 5:10 pm	အပြောင်းအလဲကို ယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက် စစ်တပ်နောက်ခံ ဘောင်ဘီချွတ် အစိုးရ ရဲ့ပကတိ ပုံရိပ် ကွဲပြားလာပြီဖြစ်တယ်။ ကဲ-ဘာလုပ်ကြမှာလဲ–
Reply	ko zinn November 28, 2012 - 5:19 pm	သူတို.က အာဏာရှင်စိတ်ဓတ်တွေ မကုန်သေးဘူးလေ ပြီးတော.လဲ သူတို.အဖွဲ.ပြောနေတဲ.ဒီမိုခရေစီဆိုတာကိုလည်း အပြည်.အ၀မယုံကြည်နိုင်သေးဘူး။
Reply	မောင်မောင်လှ November 28, 2012 - 9:47 pm	ဒါဘဲဗျာ ဗမာပြည်ဆိုတာ သမ္မတကြီးထောက်ခံပွဲတို့ ကင်တာနားရှုတ်ချပွဲတို့ ကြတော့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်၊ အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေကြတော့ ဖမ်းဆီးတယ်၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဘယ်သူဖန်တီးတာလဲ၊ ဘယ်သူဦးဆောင်တာလဲ အစိုးရကို မဖော်ခိုင်းနဲ့တသက်လုံးမိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေများလာရင် နောက်ထပ် အဓိကရုန်းသို့ မဟုတ် တခုခု ထပ်ပေါ်အုံးမှာဘဲ၊ ဗမာတွေကလည်း၊ အမျိုးဘာသာကို စောက်ရှောက်တဲ့ ဒီလိုအစိုးရကြီးကိုထောက်ခံကြဦးမှာဘဲ။ လုပ်ကွက်တွေက ရိုးနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေက မရိုးတာ၊ ဒီအကွက်ထဲဘဲ တန်းဝင်တော့တာဘဲ။ သတိထားပေါ့ဗျာ၊ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ အမျိုးသားရေးကိုကြိုက်သလောက် ထားဗျာ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ထားလိုက်ကြပါဦး၊ အမှန်တွေနဲ့ ဝေးနေမှာ စိုးရိမ်လို့ သတိပေးရတာပါ၊ ဒီအစိုးရက လူတွေက အရင်လူဟောင်း အကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့ ဆိုတာ မမေ့ကြရင် ပြီးတာပါဘဲ။ ခင်ဗျားတို့ အသုံးချခံတွေမဖြစ်ကြစေနဲ့ ပေါ့ဗျာ